maamulaha sicirka go'an Nidaamka wareegi
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ maamulaha sicirka go'an Nidaamka wareegi
Ma maamulaha go'an heerka wareegi badanaa loo arkaa in deymaha card sida, laakiin haddii aad si dhab ah loo isticmaalo, sidoo kale noqon lahayd dad badan ma oga sida dib loogu bixiyo.
Markan, wada jir ah ula faa'iidooyinka iyo khasaaraha nidaamka wareegi go'an heerka maamulaha la soo bandhigi doonaa.
waa maxay maamulaha go'an heerka wareegi
maamulaha go'an heerka nidaamka wareegi iyo, at tiro Fundka wakhtiga heshiiska la galay, wax ku samayn doonaa bixinta bil walba.
Gaar ahaan, by heerka go'an maamulaha waa tarmay, xaddiga lacagta dulsaar by dhabta ah ee sannadkii deynta waa dheelitirka waa tarmay, la dejin doonaa sida lacagta bixinta bil kasta lacag.
Haddii tusaalooyin gaar ah
tusaale ahaan hoos 4% dheelitirka credit macaamiisha ee heerka maamulaha go'an wareegi, amaahatay 100,000 yen 10% dulsaarka sannadlaha ah, xisaabinta waa sida soo socota Waxa ay noqon doontaa.
100,000 yen × 4% + (100,000 yen × (10 ÷ 12 bilood)) _ x000D_ = 4,000 yen + (100,000 yen × 0,83%) _ x000D_ = 4, Si uu ugu caddeeyo dheelitirka ee 830 yen deynta
hoos u bixinta lacagta kasta, waxaa lagu gartaa sii dhaadhacayeen bixin si dabiici ah bil walba bil kasta. _X000D_ ay dhacdo bisha soo socota,
((\_ 100,000 yen -4830) × 4%) + (\_ 100,000 yen -4830) × 0,83%) _ x000D_ = (95.170 yen × 4%) + (\_ 95.170 × 0,83%) _ x000D_ = waxa ay noqon doontaa 3807 yen Tasu790 yen
farqiga u dhexeeyaa 233 yen aan qiimo lahayn, ka dib markii lix bilood ah iyada oo la isticmaalayo ee hoos-dheelitirka aad iman kartaa in ku dhow 3000 oo yen in ay 5000 yen.
maamulaha go'an heerka wareegi mudnaan waa in tirada bixinta wakhtiyada loo xisaabin karaa ka hor.
waayo bil walba si sahlan loo kaso noqdo sida immisa maamulaha waa, tirada bixinta final jeer sidoo kale waa ku haboon oo ay fududahay in la fahmo.
sidoo kale loogu talagalay dadka si ay u isticmaalaan ee hay'adaha maaliyadeed markii ugu horeysay, dhihi lahaa in lagu qorshayn karo isticmaalka. Inta in ay sidoo kale
bixinta, waa faa'iido weyn, sababtoo ah wax ka yar maamulaha iyo xiisaha go'an heerka wareegi nidaamka. Maxaa yeelay, waxaa sidoo kale waa hab in ay diiradda saaraan abaalmarin maamulaha
, tirada jeer la baabi'iyay doonaa kartaa fiican halkan waa badan dabcan. Haddii aad
fikirayo amaahashada 100 milyan oo tirada jeer 200 jeer u dhow, waxaa jira waqtiyo kala duwan oo ku saabsan 15 sano, ku dhashay maalmood xisaabinta.
xaqiiqada ah in tirada bixinta waa yar yahay, waa in u baahan yahay xaddi yar oo xiiso. Haddii aad amaahatay
50 million iyo farqiga u dhexeeya maamulaha iyo nidaamka wareegi xiiso go'an heerka noqon doonaa mid aad u ballaaran oo ku saabsan 150,000 yen.
Sababta oo ah farqiga u yar oo wakhtiga bixinta bil kasta, dad aan yarayn oo aan ogaan lahaa farqiga.
sida darrada maamulaha nidaamka wareegi go'an heerka, lacagta bixinta bil kasta, waxaa jira hal dhibic oo waxaa la filayaa inuu ka badan yahay maamulaha iyo nidaamka wareegi xiiso go'an heerka.
Tani waa sababta xaddiga lacagta ay ku dhaceen maamulaha, ka badan habka kale ee bixinta. Xitaa haddii dulsaarka
waa isku mid, laga yaabaa in aad leedahay si aad faraqa u dhexeeya 10,000 oo yen u dhow culaabtii in boorsada aad ku dhalatay.
haatan, sidoo kale waa run in shirkad yar oo lacageed ku mideysan yihiin nidaamka wareegi go'an heerka maamulaha.
Sidaa darteed, xitaa haddii aad rabto haddii ay u dooran hab this, meesha ugu horeysa ee laga yaabo in aad shirkad aan la maareeyay.
dheeraad ah, si ay sheegayaan in wax dhib ah maleh sida bixinta waxaa kor u kacay, maxaa yeelay, ma iibsan waa in ay la wareegi credit, sidoo kale waxaa jira halista ah ee xilliga bixinta noqdo muddo ka badan oo amaah ah oo caadi ah.
Si kastaba ha ahaatee, haddii kororka xaddiga set lacagtii, waa awooda loo abaalgudi karaa iyaga ka mid ah waqtiga hore.
maamulaha sicirka go'an nidaamka wareegi deyn buu igu ahaa ka
, by heerka Fundka go'an tarmaan, waa maxay bixinta ee xaddiga lacagta dulsaar. Sida gargaarka
, waxaa Wajiyadu ku xusan waxaa laga yaabaa in tirada bilaha in abaalmarin loo xisaabin karaa tan iyo bilowgii.
Sidoo kale in lacagta bixinta lacagta, ugu yaraan marka la barbardhigo hababka kale, uma baahnid inaad wax laga walwalo bixinta badan oo xiiso leh.
Dhanka kale, sida darrada ah, bixin badan oo codsatay in ay bil kasta, waxa la siin doonaa waa in.
marka kirada xitaa laga heli karo boqolaal kun, mararka qaar xitaa weyn qadar lacag in la siiyo meesha, waa in aad ka doortaan si ay u fahmaan.
Intaa waxaa dheer, sababtoo ah waxaa jira shirkado yar ku sameeyeen maamulaha go'an heerka wareegi habka, waxay ku xiran tahay waqtiga loo baahan yahay lacag aad u baahan tahay si ay u sameeyaan shirkada si ay u doortaan si taxadar leh.
nidaamka wareegi go'an heerka maamulaha deyn buu igu ahaa maamulaha, by heerka Fundka go'an tarmaan, waa maxay bixinta ee xaddiga lacagta dulsaar. Sida gargaarka